बुद्ध नेपालमा जन्मेका थिए भन्दैमा पुग्छ ? |
10:41:05 | बिचार मुख्य समाचार
बुद्ध शब्दको अर्थ के हो ? के यो कुनै मान्छे विशेषको नाम हो वा अवस्था ? के महाराज शुद्धोधनका छोरा राजकुमार सिद्धार्थ गौतमभन्दा अघि पनि संसारमा बुद्धहरू थिए ? राजकुमार सिद्धार्थ जो कालान्तरमा शाक्यमुनि गौतम बुद्ध भनेर चर्चित भए, उनले के–के भनेका थिए ? कसरी भनेका थिए ? के अभिप्रायले भनेका थिए ? कुन–कुन ठाउँहरूमा भनेका थिए ? गौतम बुद्धको जीवनका चार महत्वपूर्ण घटना कहाँ घटित भएका थिए ?
बुद्धले नेपालको परिचयमा त्यत्रो विशाल योगदान दिए पनि नेपाल राज्यले वा नेपाली जनस्तरले उनको स्मृति र धर्मका निम्ति आजसम्म के गर्यो त ?
यस्ता कयौं प्रश्नलाई कार्पेटमुनि लुकाएर ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल’ भनेर मात्र हाम्रो दायित्व पूरा हँदैन । यस विषयलाई अलि फराकिलो र ताजा कोणबाट हेरिनु अत्यावश्क भइसकेको छ । बुद्ध विराटताका प्रतीक हुन्, संकीर्णताका होइनन् । २५ सय वर्ष बितिसक्दा पनि उनका शिक्षाको महत्व संसारमा रत्तिभर घटेको छैन । बरु दुनियाँका सबैभन्दा आधुनिक र शिक्षित भनिएका भू–भागमा तीव्र रफ्तारमा फैलिँदो छ ।
हेक्का रहोस्, बुद्ध उदारता र संयमका सगरमाथा हुन्, कुनै अल्पज्ञानीको उत्तेजनाले निर्मित बालुवा ढिस्का होइनन् । बुद्धका विषयमा केही लेख्न बस्दा पंक्तिकारलाई बडो संकोचको अनुभव भइरहेको छ । किनभने यो विराट विषयमा लेख्न, बोल्न वा माइकिङ गर्न म विल्कुलै अनुपयुक्त पात्र हुँ । पाटनका मित्र अशोक वज्राचार्यको निरन्तर आग्रह टार्न नसकी यस विषयमा आफ्नो मनका कुरा पोख्न बसेको हुँ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रेरणा त स्वयं शाक्यमुनि बुद्धका यी शब्द हुन्, जो कुनै पनि बुद्धमार्गीको मनमा कुँदिएका हुन्छन्– ‘हे भिक्षु  ! मैले भनेको भन्दैमा तिमीले केही पनि मान्नु पर्दैन । मेरा शब्दलाई आगोमा पोलर, पानीमा डुबाएर र आकाशमा उडाएर जाँची हेर । त्यसपछि पनि विश्वास लागेछ भने मात्र मेरा शब्दमा पत्यार गर ।’
आफ्ना अनुयायीलाई त्यत्रो अपार स्वतन्त्रता दिने शाक्यमुनि बुद्धको करुणाको सम्झना मात्रले कुनै पनि बुद्धमार्गीको मन भावुक नरही बस्न सक्दैन । त्यसैले त ओशोजस्ता महापुरुष पनि ओजपूर्ण आवाजमा यो भन्न बाध्य छन्– ‘गौतम बुद्ध मात्र त्यस्ता हुन्, जसले कसैसँग आस्था वा श्रद्धाको पूर्वभुक्तानी (एड्भान्स) माग्दैन । मलाई मान् अनि मात्र तँलाई फल दिन्छु भन्दैन । शिर झुका अनि ज्ञान दिउँला पनि भन्दैन । पर्वत त संसारमा धेरै छन् तर हिमालय अतुलनीय छ । गौतम बुद्ध अतुलनीय छन् । उनले शिर नझुका भन्दाभन्दै पनि साधकको शिर आफैं, स्वतः स्वचालित निहुरिन्छ ।।श्रद्धाले ।।।।।’
शाक्यमुनि बुद्धको जीवनमा चार स्थानहरूको महत्व सर्वाधिक छ । लुम्बिनी (जहाँ उनी जन्मिए) बोधगया (जहाँ उनले बुद्धत्व प्राप्त गरे) सारनाथ (जहाँ उनले पहिलो प्रवचन दिए) कुशीनगर (जहाँ उनी निर्वाण भए) यी चारैवटा स्थानहरू संसारभरिका कुनै पनि बुद्धमार्गीको जीवनमा अतुलनीय छन् ।
अब पंक्तिकार एक प्रश्न समाजका अगाडि राख्न चाहन्छ । यदि गौतम बुद्धका प्रति हाम्रो चासो र श्रद्धा साँचो हो भने ‘बुद्ध वाज बर्न एन नेपाल’ भनेर मात्र पुग्दैन । बुद्धका प्रति हाम्रो श्रद्धा पाखण्डी होइन भने त्यति भनेर मात्र पुग्दैन । बुद्धले नेपाललाई संसारमा त्यत्रो परिचय दिए । हामीले उनको जन्मस्थल लुम्बिनी र उनको धर्मलाई के चाहिँ गुण तिर्यौं त ? यतिका दशकपछि पनि लुम्बिनी क्षेत्र किन त्यस्तो हालतमा रु बुद्ध शिक्षाको विकास र बिस्तारमा योगदान दिन नेपाल सरकार र समाजले के कति गरेको छ ? भुइँचालो पछि गाउँघरमा अनेकन् गुम्बा भत्किएका, चर्किएका छन् । बुद्धको देशले के गरेको छ तिनका लागि ?
हुन त, हामीले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गरे पनि, नगरे पनि बुद्धलाई खासै फरक पर्दैन होला । प्रशंसक, निन्दक वा निरपेक्षको हिसाब गर्ने क्याल्कुलेटर बोकुन्जेल कोही कहाँ बुद्ध हुन्छ र  ! फेरि, बुद्धको कुनै पासपोर्ट पनि त हुँदैन नि  ! पासपोर्ट बोकुन्जेल बुद्ध हुन पनि सकिँदैन । न बुद्धलाई हामीसित कुनै आशा वा लोभ छ । आशा, लोभ र डरबाट पर गएकाले नै त राजकुमार गौतमले बोधी पाए, बुद्ध भए ।
हामीले बुद्ध जन्मस्थल, बुद्ध धर्म र बुद्ध संघका निम्ति आजसम्म यथोचित योगदान गरेका छैनौं । यो कटु सत्य हो । बुद्धको जन्मस्थलबारे अज्ञानतावश, कुटिलतावश वा दुष्टतावश भ्रम फैलाउने प्रयास जसले गरे पनि सत्य लुक्न सक्दैन । तर, अर्को एक कटु सत्य पनि छ । बुद्धका प्रति हामीले अर्थात् बुद्ध जन्मस्थलका निवासीहरूले आफ्नो कर्तव्यको पालना त्यसरी गरेका छैनन्, जसरी गरिनुपथ्र्यो वा पर्छ। यो स्थितिमा परिवर्तन अनिवार्य छ । बुद्धले हामीसित केही मागेका छैनन् भन्दैमा यथावस्थामा रहन सकिन्न ।
संसार हेर्दै छ– गौतम बुद्धको नाम लिँदा नेपालीको आवाजमा राप मात्र छ कि कर्तव्यपालनको न्यूनतम प्रकाश पनि छ ?